Siansa - Repoblika, Hairafibatana, Toe-karena, Ignacy Łukasi
ⓘ Siansa - Repoblika, Hairafibatana, Toe-karena, Ignacy Łukasiewicz ..
Astronomia Biolojia Ekolojia Filôzôfia Fizika Jeografia Kajimirindra Matematika Siansa ara-tsosialy Simia Tantara Teknolojia
Ny Repoblika dia endrika governemanta iray izay azo dikaina ho "raharaham-bahoaka". Ny famaritana ny repoblika ankehitriny dia governemanta tsy manana mpanjaka ho mpitondra ny firenena. Ny repoblika dia tokony tsy afangaro aminny demokrasia, ny repoblika dia ny fitondranny lalàna nefa ny demokrasia dia midika ny fitondranny daholobe. Io dika faranny demokrasia io dia avy ainny teny grika Dimokratía izay ahitana ny hoe Demos sy ny hoe Kratos.
Ny hairafibatana dia ny sampananny siansa mandalina ny firafitry ny vatanolombelona na ny vatan-javamananaina, aminny alalanny fandidiana ny fatinizy ireo. Ny tantaranny hairafibatana dia nanomboka taminny 1600 tal. J.K, rehefa nanomboka nandinika momba ny hairafibatanolombelona ny Ejipsianina. Nahita ny asanny taova maro toy ny aty, sarakaty, voa, fo zareo ary voalohany nahita ny rafitra sy ny asa ao aminny rafitra limfatika. Ny mpahairafibatanolombelona dia matetika miasa aminny oniversite, sekolin-dokotera na ny fampianarana toeram-pitsaboana. Matetika izy ireo mandray anjara aminny fam ...
Ny toe-karena na ekonomia dia siansa mikasika ny fanamboarana, fizaràna, fifanakalozana ny entana ary sampandraharaha. Dinihanny siansa ekonomika ny toe-karena miankina aminny teôria ekonomika.
Jan Józef Ignacy Łukasiewicz dia mpahay siansa, mpamorona, mpiantoka mizaka ny zom-pireneni Polonia, Armenia teraka ny 8 Martsa 1822 ary maty ny 7 Janoary 1882